UFRIDA KAHLO ngobumba lwe-polymer noma ukumodela kokumodela - ISINYATHELO NGESINYATHELO | Imisebenzi yezandla ivuliwe
UFRIDA KAHLO ngobumba lwe-polymer noma ukumodela kokumodela - ISINYATHELO NGESINYATHELO
Kulokhu Ukufundisa Ngikukhombisa ifayili le- isinyathelo ngesinyathelo ukuze ukwazi ukumodela ubuso be- Frida Kahlo con ubumba lwe-polymer noma omunye ukumodela unamathisele. Uzobona ukuthi kulula futhi ungayisebenzisela ukhiye, i-brooch, i-pendant, uhlobise ifreyimu, ibhukumaka ...
Ukwenza ku Frida Kahlo uzodinga noma yiluphi uhlobo lwe ukumodela unamathisele. Ngisebenzise inhlama eguquguqukayo kepha ungasebenzisa noma yini oyithandayo kakhulu. Uzodinga okulandelayo imibala:
Okumhlophe ne-orange (uma ungenayo umbala wenyama)
Umbhangqwana we- i-herramientas njengendlela eyodwa kugobile ukumaka umlomo kanye no ummese ngommese ukwenza umgodi futhi usike.
Okokugcina, udinga i- ukhiye uma uzoyengeza, noma enye umphelelisi lapho ufuna ukubeka khona ubuso be Frida Kahlo.
Esilandelayo isifundo sevidiyo Ngikukhombisa ifayili le- isinyathelo ngesinyathelo ngokuningiliziwe ukuze ukwazi ukumodela ubuso be- Frida Kahlo indlela elula.
Ngisho izingane Bangalandela izinyathelo ezikulesi sibalo, ngakho-ke singathatha ithuba lokubafundisa ngendlela emnandi ukuthi kwakungubani Frida Kahlo.
Ukuze ungakhohlwa lutho futhi ungakwenza kalula, sizobuyekeza kafushane okufanele ukwenze:
La umfana uFrida uzoba ngu- i-bola ochotshoziwe ngentende yesandla. Kuyo kuphawula i- umlomo futhi i ikhala, bese udweba amehlo futhi i cejas isici so Frida Kahlo.
Ngokuba izinwele welula umbala omnyama bese udala imichilo emincane ngawo. Le micu kufanele inanyathiselwe phezulu kwekhanda, ngendlela yokuthi idayagonile futhi ihlangane engxenyeni ephezulu kakhulu. Mayelana nezinwele sizokwenza i- flores que Frida Kahlo wayehlala eyithwala ekhanda. Izimbali zenziwa ngokwakha i- línea mncane futhi uyichoboza. Kumele uhambe ukugoqa iyazitotosa njengomnenke.
I-Las amaqabunga futhi i namacici zingamaconsi. Iconsi lenziwa ngokugingqa ibhola ohlangothini olulodwa, ngale ndlela uzolola umkhawulo owodwa kuphela bese omunye uzobe uyindilinga, yingakho sikubiza ngokuthi yi-drop. Kufanele uchoboze amaqabunga bese umaka imigqa ngommese. Uma usuqedile ezine noma ezinhlanu, ungazinamathisela ezinweleni.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » UFRIDA KAHLO ngobumba lwe-polymer noma ukumodela kokumodela - ISINYATHELO NGESINYATHELO
Uyenza kanjani i-albhamu yezithombe ngezinti ze-ayisikhilimu
Ungayenza kanjani ixoxo lakho likhulu